OFISIALY fanambarana maty ny fiangonana katolika | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ao amin’ny lahatsary amin’ny teny Portiogey no tena mahatakatra ny Papa!
Inona no manafintohina ao amin’ity lahatsary ity dia ny papa ampahibemaso mandà an’i Jesosy Kristy.
Ny papa nilaza ampahibemaso fa ny zava-misy fa i Jesoa Kristy nohomboana dia tsy nahomby ….!
Ary izao no tsy tsy fahombiazana, satria nahalala izy fa i Kristy hohomboana amin’ny hazo fijaliana ary izy mihitsy aza tamin’i Petera fa eo anoloan’ny maneno akoho dia handà Ahy intelo ianao ….!
Fantatr’i Jesosy hatramin’ny voalohany ny toriteniny izy hiafara amin’ny hazo fijaliana.
Fa dia nanaiky ny sorona ny ainy mba hamonjena ny fanahintsika, satria ny olona dia tena tsy madio sy mpanjono misy zavatra tsy madio afaka miditra ny fanjakan ‘ny lanitra.
Izany dia amin’ny alalan’ny ran’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana fa efa nanavotra!
Ny papa nanao ny fanamarihana an’i Jesoa Kristy ho toy ny nolazain’ny mpaminany hoe ISLAM tsotra, feno fikasana tsara, fa tsy satria izy maty teo amin’ny hazo fijaliana ….!
Avy amin’ny Kristianina tsy mendrika Ny fanamarihana toy ireny ny finoana, fa avy amin’ny Papa, ireo teny ireo fanambarana ofisialy ny maty ny Fiangonana Katolika dia nanambara fa eo ambanin’ny thunderous tehaka any New York .
Fa ny Papa fa tsy i Jesosy Kristy, zanak’i Andriamanitra (Andriamanitra no nanao ny olona rehefa mampianatra ny filazantsara) fa misy lehilahy toy ny olon-kafa miaraka amin’ny fanomezam-pahasoavana faminaniana izay maty teo amin’ny hazo fijaliana ….!
Ny kely nanesoeso hoe ny Papa dia fantsika rehetra izay zavamaniry eo amin’ny tànany sy ny tongotr’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazo fijaliana.
Miaraka ny fara-tenin’i ny Papa, dia afaka milaza fa fomba ofisialy ny Fiangonana Katolika amin’ny fomba ofisialy maty eo ambanin’ny thunderous any New York tehaka 25 Septambra, 2015 amin’ny Katedraly St Patrick ny.
Mivavaha mafy ry malalako rahalahy sy anabavy ny hamerenana ny tany ny Tompontsika Jesosy Kristy ho irery isika fomba ofisialy sy ny loza lehibe izao.
Andriamanitra anie hitahy anao